Legalon (လီဂါလွန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Legalon (လီဂါလွန်)
Legalon (လီဂါလွန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Legalon (လီဂါလွန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Legalon ကို ဘာအတွက် အသုံးပြုတာလဲ။
Legalon ကို နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်းနဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်းတို့ကို အထောက်အပံ့ပြုတဲ့ ကုသမှု ဆေးတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။
Legalon ကို အခြားပြဿနာများအတွက်လည်း အသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံ သိရှိလိုပါက ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျွင်သူတို့ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Legalon ကို ဘယ်လို သောက်သုံးရမှာလဲ။
Legalon ကို ရေတစ်ခွက် ဖြင့် သောက်သုံးနိုင်ပါ။
Legalon နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Legalon ကို ဘယ်လို သိမ်းဆည်းထိန်းသိမ်း ရမလဲ။
နေရောင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် အစိုဓါတ်တို့ဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ အခန်းအပူချိန်မှာ ထိန်းသိမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ Legalon ကို ရေချိုးခန်းနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းမယ်ဆိုရင် ဆေးပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Legalon တံဆိပ် အမျိုးမျိုး ရှိသလို ထိန်းသိမ်းပုံလည်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ထိန်းသိမ်းနည်းကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မဟုတ်က ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပါ။ ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေရန်အတွက် ကလေးနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အဝေးတွင် ထားရှိပေးပါ။
Legalon ကို မညွန်းပဲနဲ့ အိမ်သာထဲသို့ ရေမြောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ပစ်သင့်ပါ။ သက်တမ်းကျော်သွားမယ်၊ မလိုတော့ဘူးဆိုရင် သေချာစွန့်ပြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲဆိုတာ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကို မေးမြန်းပါ။
Legalon ကို အသုံးမပြုခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ။
အောက်ပါ အကြောင်းအရင်းတို့ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေး၊ တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နဲ့ နို့တိုက်နေစဉ်မှာ သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကော ဘေးကင်းမှာလား။
နို့တိုက်မိခင်များအတွက်။ ဘေးကင်းလား မကင်းလားဆိုတာ သေချာ တိတိပပ ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ သတိထား အသုံးပြုပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Legalon ကနေ ဘယ်လို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရနိုင်သလဲ။
အချို့သူများတွင် Legalon သည် အနည်းငယ် ဝမ်းပျော့ခြင်းကို ခံစားရစေတယ်လို့ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။
ထိုအရာသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကုန်လုံးမဟုတ်ပါ။ အခြားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Legalon ကဘယ်လို ဆေးမျိုးတွေနဲ့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ။
Legalon ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အရက်နဲ့ အစားအစာတွေက Legalon နှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေ ရှိသလား။
Legalon က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Legalon အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိသလဲ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက် Legalon နဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Legalon သည် သင်ခံစားနေရသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ ထိုဓါတ်ပြုမှုက သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ဆေး၏အာနိသင် ပြောင်းလဲခြင်းကို လည်းကောင်းဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆေးမသောက်မီ သင်လက်ရှိ ခံစားနေရသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်ကို ပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာသည် ဆေးပညာ အကြံပြုချက်များ၏ အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ် သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့နဲ့ အမြဲတမ်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
လူကြီးတွေကို ပေးရမဲ့ Legalon ဆေးပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
70mg ဆေးတောင့်။ တစ်ကြိမ် နှစ်တောင့်၊ တစ်နေ့ ၃ကြိမ်
140mg ဆေးတောင့်။ တစ်ကြိမ် တစ်တောင့်၊ တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်
ကလေးတွေကို ပေးရမဲ့ Legalon ဆေးပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေးတွေကို ပေးရမယ့် ပမာဏကတော့ မထုတ်ပြန်ထားပါ။ ကလေးတွေအတွက် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးမကင်းလောက်ပါဘူး။ အသုံးမပြုခင်မှာ ဆေးရဲ့ ဥပါဒ်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Legalon ကို ဘယ်လိုပုံစုံမျိုးတွေနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မလဲ။
Legalon ကို အောက်ပါ ဆေးပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ပြင်းအားအမျိုးမျိုး နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
70mg Legalon ဆေးတောင့်
140mg Legalon ဆေးတောင့်
ဆေးလွန်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ။
အရေးပေါ်အချိန်တွေမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ လောလောဆယ် သောက်သုံးလျှက်ရှိသည့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးဝါးများ၊ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးဝါများ( ဆေးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သော ဆေးဝါးများ) ရေးချထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Legalon သောက်ဖို့ လွတ်သွားမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြန်သောက်ပါ။ နောက်ထပ်ဆေးသောက်ဖို့အချိန်နဲ့ နီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့ ဆေးကို လွှတ်လိုက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်သွားပါ။ ဆေးကို နှစ်ခါပြန်မသောက်ပါနှင့်။
Legalon. http://www.flordis.com.au/product/legalon. Accessed October 30, 2016.
Legalon. http://www.mims.com/philippines/drug/info/legalon. Accessed October 30, 2016.